Biilasha Bixiyaha iyo Sheegashooyinka - Caymiska Caafimaadka Deegaanka ee Gobolka Washington - CHPW
Bogga ugu weyn > Xarunta Bixiyaha > Xarunta Tababbarka Bixiyaha > Biilasha Bixiyaha iyo Sheegashooyinka
Raadi macluumaadka biilasha ee aad ugu baahan tahay inaad si habsami leh ugu socodsiiso shaqadaada.
Waxaan halkan u nimid inaan ka dhigno habka biilka mid fudud.
Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington (CHPW), ujeedkeenu waa kuu fududee si aad u hesho macluumaadka biilasha ee aad u baahan tahay. Adeegso ilaha ku yaal boggan si aad u maamusho biilashaada, ama arag Buugga Takhasuska Wixii macluumaad dheeraad ah.
Fadlan ogow inaad soo gudbin karto sheegashooyinka elektarooniga ah ama warqadaha.
CHPW waxay aqbashaa sheegashooyinka elegtarooniga ah iyadoo la sii marinayo Availity Clearinghouse. Macluumaad dheeraad ah ayaa laga heli karaa our Buugga Takhasuska, ama waxaad kala xidhiidhi kartaa Availity at (800) 282-4548. Fadlan isticmaal Aqoonsiga Bixiyaha CHPW: CHPWA.
Sheegashada warqadda waa in lagu soo diraa ciwaanka hoose. Tan waxaa ku jira khubarada, xarunta, iyo sheegashooyinka caafimaadka dabeecadda dhammaan qorshayaasha faa'iidooyinka CHPW.
Tababarka Biilasha Lacagta
Waxaan kugula talineynaa bixiyeyaasha qandaraaska cusub qaatay dhameystirka tababarka biilka maalmood gudahood 90 qandaraaskooda taariikhda uu dhaqan galayo.
Daahfurka Tababarka Biilasha ee Hadhaaga ➜
Markuu dhamaystay tababarka sidoo kale waa inaad buuxisaa cadeyn.
Qirashad Dhameystiran ➜
Tilmaamaha Biilasha ee Cusboonaysiinta iyo Cusboonaysiinta
Tilmaamaha biilasha ee CHPW wuu is beddeli karaa waqti ka dib. Hoos waxaa ku yaal hagitaankii ugu dambeeyay si xarfaha isugu xiga.
* Dhagsii si aad u aragto tilmaamaha biilasha
Adeegyada Acupuncture - Apple Health (Medicaid)
Waan ku faraxsanahay inaan bixino faa'iido acupuncture ay heli karaan xubnaheenna waaweyn ee Caafimaadka Apple, da'doodu tahay 18 iyo wixii ka weyn. Xubnaha u qalma way heli karaan illaa 6 booqashooyin acupuncture ah laga bilaabo Janaayo 1 illaa Disembar 31. Booqashooyinka acupuncture ee aan la adeegsan ha is rogin ilaa sanadka kale ee kaalandarka.
Akhri tilmaamaha biilasha ee loogu talagalay adeegyada acupuncture ➜
Adeegyada Ilkaha ee Caafimaadka Apple
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan biilasha adeegyada ilkaha ➜
Shuruudaha Cashuur Bixinta iyo Bixinta
CHPW waxay jeceshahay inay xasuusiso dhamaan rugaha caafimaadka iyo bixiyeyaasha sheegashooyinka waa in lagu soo dallaco lambarro ansax ah, oo ku habboon canshuurta bixinta bixiyeha biilasha iyo, marka ay khuseyso, adeeg bixiyaha.
Dhaqan galka Janaayo 1, 2021, Aqalka nadiifinta ee CHPW wuu diidi doonaa wixii sheegashooyin ah ee la soo gudbiyo iyada oo aan la bixinayn biilal ansax ah iyo / ama bixinta lambarro taxonomy ah sheegashooyinkaasna aan loo gudbin doonin CHPW.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan shuruudaha lambarka taxonomy ➜
Gudniinka - Apple Health (Medicaid)
Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington (CHPW) wuxuu ku faraxsan yahay inuu ku dhawaaqo faa iidada cusub ee lagu daray ee loogu talagalay xubnaha CHPW Apple Health: Adeegyada bilaabmaya Febraayo 1, 2021, CHPW waxay bixin doontaa ilaa $ 200.00 gudniinka aan caafimaadka u baahnayn.
Akhriso tilmaamaha biilka ee gudniinka ➜
Heshiiska Muhiimka ah ee Bixiyaha iyo Xaaladda NPI
Waxaan cusboonaysiinnay Heshiiska Bixiyaha Muhiimka ah iyo macluumaadka Xaaladda NPI.
Akhri xogtayada Heshiiska Bixiyaha Muhiimka ah iyo heerka NPI FAQs wixii macluumaad dheeraad ah➜
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Habka Qiimeynta ➜
Cusboonaysiinta Biilka ee Caafimaadka Habdhaqanka Daryeelka Aasaasiga ah
Cusboonaysiinta ayaa laga sii daayay Maamulka Daryeelka Caafimaadka (HCA) ee la xiriira xeerarka biilasha ee la xiriira adeegyada caafimaadka hab dhaqanka. Dib u eeg kuwaan adoo tixgelinaya adeegyadaaga caafimaadka hab dhaqanka.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan cusbooneysiinta biilasha caafimaadka habdhaqanka ➜
Baro sida loo eeg oggolaanshaha hore iyo gudbinta, sidoo kale galaan sheegashooyinka in our Bogga macluumaadka bukaanka HealthMAPS.
Daahfurka Tababarka Xariirka ee 'HealthMAPS' ➜
Ku soo dejiso foomamka hoose sida PDF-yada oo raac tilmaamaha si aad ugu maamusho sheegashooyinkaaga waxqabadka leh CHPW.
Sheegashooyinka Taageerada Dukumiintiga Xaashida Daboolka
Sheegasho Sax ah - Xaashida Jaangooyada Jaangooyada
Foomka Oggolaanshaha Hysterectomy
Foomka Oggolaanshaha Bacriminta
Foomka Oggolaanshaha Jeermiska - Isbaanish
1500 Foomka Sheegashada iyo Tilmaamaha
Foomka Sheegashada UB04 iyo Tilmaamaha
Email u dir Kooxdayada Xiriirka Bixiyaha oo leh su'aalo ku saabsan biilasha. Mid ka mid ah Wakiilada Xiriirka Bixiyeyaasha ayaa kula soo xiriiri doona.
Taariikhda Ugu Dambeysa ee Cusboonaysiinta: Abriil 4, 2022